Birta - DT-TotalSolutions
Alaabta la isku duro
Mashiinka caadiga ah
Xarunta Cilmi-baarista Alaabooyinka
Raacitaanka alaabooyinka birta ah ee tayada sare leh
Ku shaabadeynta Dhimashada
Shaabadeynta horumarka waa xalka ugu waxtarka badan ee stamping kaas oo hubin kara wax soo saarka iyo tayada labadaba.
Waxaa jiri kara dhowr qaybood oo qaybo shaabad ah kuwaas oo ay ku jiraan qaybo kala duwan oo qaabab kala duwan ah oo laga soo saaray shaambad horusocod ah.
Muddo dheer, sida loo kormeero tayada qaybtu waxay ahayd caqabad weyn, ilaa marka aan isticmaalno tignoolajiyada aragga oo aan ku rakibno nidaamka CCD si aan u sii wadno shaabadeynta.
Nidaamku wuxuu isku daraa shaqada hubinta tayada oo ay ku jiraan qaabka qaybta, cabbirka cabbirka, hubinta muuqaalka qayb.
Dhib maleh waxaad raadinaysaa qaybo shubaya dhinta oo laga sameeyay Alu, Zinc, ama MgWaxaan ku siin karnaa adeegeena tayada sare leh miisaaniyad macquul ah.
Qaar ka mid ah qaybo ka mid ah kuwa dhinta ee u baahan farsamaynta labaad ee farsamaynta sida dalool qodista, de-burinta iyo dajinta, waxaanu ku siin karnaa adeegga hal-joojinta ah. Tani waa xalka dhaqameed ee dhinta-dhimista.
Si loo badbaadiyo kharashka wax soo saarka tuurista, caaryada tuurista badan-slider dhimanwaa xalka ugu fiican. Qaybaha ka soo baxa caaryada tuurista dhalooyinka badan-slider, looma baahna shaqo dheeraad ah oo ku saabsan de-burinta ama nadiifinta qayb qayb ah.
Labadan tilaabo waxay kaa badbaadin karaan lacag la'aan kharash shaqo oo aad u badan. Wadarta wakhtiga wareegga shubista waxay noqon kartaa wax ka yar 10 ilbiriqsi.
Si wada jir ah ayaanu sida caadiga ah u bixinaa si aan u samayno de-gating qalab goynta + khadka otomaatiga ah, sidaan oo kale waxaad u dejin kartaa de-gating qalabka goynta iyo khadka tooska ah ee ku dhawaad ​​gabi ahaanba bilaasha awood aad u hesho si aad u hesho qaybaha ugu dambeeya.
Maal-gashiga maal-gashiga waa xal wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka birta aan la taaban karin, tusaale ahaan qaybo ka samaysan 403SS iyo 316SS, iwm.
Kani waa bir duug ah oo bir ah oo lagu shubo oo laga sameeyay ciid tuurid. Habka wax-soo-saarka guud waa mid aad u dheer oo gaabis ah.
Caadi ahaan waxay qaadataa ilaa bil iyo badh hal dufcood oo wax soo saar ah. Kadib samaynta caaryada Alu. ama ka birta, caaryada wax ayaa sidoo kale loo baahan yahay.
Khasaaraha xalkani waa: wax-soo-saarka hooseeya ee muddada gaaban, waxay u baahan yihiin waqti dheer si loo buuxiyo nidaamka guud; cabbirka qaybtu aad ayuu uga yar yahay dulqaadka marka la barbar dhigo duritaan balaastiig ah iyo shubid-dhimasho sababtoo ah ilaa hadda waxaa jira habab badan oo weli gacanta lagu sameeyo iyadoo loo baahan yahay shaqaale culus; Sifooyinka qaarkood lama samayn karo waxaana laga samayn karaa oo keliya habaynta dugsiga sare sida wax-shiididda, qodista ama dhalaalka.
Cinwaanka:Honglaiya aagga warshadaha, Shatou, Chang'an Town, Dongguang City, Guangdong, Shiinaha.
© Xuquuqda daabacaadda - 2021: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.